Puntland iyo Alshabaab oo ku dagaalamay buuraha Galgala – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in shalay gellinkii dambe dagaal dhexmaray ciidamada maamulka Puntland iyo Alshabaab. Dagaalka ayaa ka dhacay wadada xiriirisa magaalada Boosaaso ee buuraleyda Golis.
Saraakiisha ciidamada Puntland iyo Alshabaab ayaa midiba dhankiisa guul ka sheegtay dagaalkaas. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Alshabaab jidgooyo u dhigteen kolonyo ka tirsan ciidamada Puntland.
Saraakiil ka tirsan ciidamadda Puntland ayaa sheegay iney dileen ilaa 5 ka mid ah Alshabaab, halka Alshabaab sheegteen iney dileen 10 ka tirsan ciidamada maamulka Puntland.
Ma jiro warar madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada labada dhinac. Ciidamada maamulka Puntland ayaa deegaanka kula dagaalamayey ALshabaab tan iyo sandkii 201.
Sawirro: Ciidamada Jabuuti oo gaadiid & qalab xoojin ah geystay Baledweyne